WAA MAXAY LAAMO LA SIIN KARO BAKAYLAHA - XOOLAHA
Cuntada la gooyey ee bakaylaha: laamaha waa la siin karaa
Cunto khafiif ah ayaa looga baahan yahay cuntooyinka jiirka. Waxay ka caawiyaan xayawaanka si ay u buuxiyaan khaladka fibreerka oo ay nidaamiyaan hababka dheef-shiid kiimikaad ee jirka.
Xilliga qaboobaha, laamuhu waxay beddelaan quudinta suuban, jiirka ayaa si joogto ah u kiciya cayayaanka sii kordhaya ee iyaga ku saabsan.
Laakiin dhirta oo idil ma ahan mid waxtar leh xayawaanka.
Laamahyadu waxay ku haboon yihiin isticmaalka jiirka jimicsiga, iyo kuwa aan ahayn, waxaanu u sheegi doonaa alaabtayada.
Waa maxay laamo la siin karo bakaylaha
Liiska geedaha kuwaas oo laamaha loo ogol yahay ee cuntada ee bakaylaha waa weyn. Warka fiicani waa in badankoodu laga heli karo gadaashaada.
Xayawaanka ku raaxaysanaya digaagada hodan ku ah fitamiinada:
Ma taqaanaa? Bakayle waxaa laga cabsiin karaa geela dhimasho (macno ahaan).
Si ka duwan sida geedo midho leh, oo la siin karo jiirka, iyada oo aan la cabsanayn, noocyada jilicsan ee jilicsan waa in lagu soo rogaa cuntada si xadidan. Tani waa:
oohin baraf ah;
Xaqiiqdu waxay tahay in jilif ee dhuxusha iyo alert uu ku jiro diirada sare ee fareeshka oo keena caloosha. Sidaa darteed, waxaa ugu fiican in ay ku quudiyaan jeexjeexyada sida cuntada ee xagaaga, marka xad-dhaaf ah cawska iyo cagaarka cagaaran sababaya shuban ee jiirka.
Birta ayaa loo yaqaanaa sifooyinka dareeraheeda, sidaas darteed isticmaalka joogtada ah ayaa khatar ku ah jiirka jilicsan. Willow waa lagama-maarmaan ah ee daaweynta infekshinka mindhicirka. Laakiin tani waa in aan lagu xadgudbin, si aanay u dhaawicin jiirka.
Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad ogaato cawska la mamnuucay bakayle.
Wax yar ma ahan waxtar u ah cirbadaha bakaylaha:
Waxaa la bixiyaa sanadka oo dhan. Laga soo bilaabo bishii Febraayo, waxay joojiyaan in ay soo galaan noocyada noocaas ah ee raashinka sababtoo ah xaqiiqda ah in dhirta ay bilaabaan inay soo saaraan rinjin, taas oo ah qadhaadh. Cirbadaha ayaa hodan ku ah fitamiinada iyo bakteeriyada, xayawaanka waa in la baro si tartiib ah waxaana la siiyaa sida waafaqsan nidaamka 14/14. Taasi waa labadii usbuucba mar inaad u baahan tahay inaad qaadato laba isbuuc oo fasax ah.
Dhammaan noocyada geedka ee liistada waxay ku haboon yihiin raashin si ay u qaataan bakaylaha caadiga ah iyo kuwa safarka ah.
Waxa kale oo aad xiiseyn doontaa inaad wax ka barato: sifooyinka dayactirka iyo quudinta ee bakaylaha ornamental iyo sifooyinka doorashada ee alaabada lagu ciyaaro ee bakaylaha iyo bakaylaha dwarf.
Maxaa la siin karaa laanta laamaha
Iyada oo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan oo ah laamaha jiirka-jiirka, Waxaa jira geedo aan ku habooneyn cuntada cunta:
gawska ayaa ah
Lafahooda waxay ku jiraan tiro badan oo ah sunta sunta. Dhirta geedaha iyo geedaha ayaa sidoo kale khatar u ah jiirka si ay u helaan cuntooyinka hydrocyanic acid.
Waa muhiim! Lafaatiirtu waxay si weyn u yareeyaan khatarta dhaawaca unugyada. Khatartu waxay ilkaha ku tirtiraan, maaha inay gogol dhigaan dabaqyada ama darbiyada guryahooda.
Qaababka quudinta xilliga qaboobaha
Cuntada daaqsinka ah waxaa loo isticmaalaa cuntooyinka bakaylaha sanadka oo dhan, laakiin gaar ahaan waa lagama maarmaan in xayawaanka xilliga jiilaalka.
Waa maxay laan nuugaya si ay u bixiyaan bakaylaha xilliga jiilaalka
Dhirta miraha iyo dhirta waxaa ku jira xaddi badan oo fitamiino kala duwan ah. Tani waxay khuseysaa laanta cirbadaha - cuntada kaliya ee cusub ee xilliga qaboobaha. Waa qani ku ah phytoncides iyo vitamiin.
Laga bilaabo dayrta goor dambe iyo inta lagu jiro xilliga jiilaalka, waxay ka caawin karaan bakaylaha inay la qabsadaan avitaminosis waxayna xoojiyaan jirkooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee bakaylaha quudinta xilliga qaboobaha.
Sida loo diyaariyo laamaha
Uruurinta laamaha waa inay bilaabaan ugu dambeyn May illaa Juunyo, iyaga oo dooranaya kuwa caleemo badan leh, ama kuwa ay kudhiibaan oo kaliya bilaabaan ubax. Laamaha dalaggu waxay ugu fiican yihiin geedo ka soo baxa wadooyinka. Tani waxay xaqiijineysaa in cuntada aad u leedahay bakaylaha aysan ku faddarin gaasaska qiiqa waxyeellada leh.
Qalajinta, xulo caleemo leh dhexroor oo ku saabsan 1 sentimitir, kuwaas oo ku xiran sariiraha yaryar. Waxa ugu wanaagsan inaad ku qallajisid qolof ama qol qallalan, qolal madow. Waa muhiim inaad ka ilaaliso qorraxda tooska ah. Wixii diyaarinta laamaha ku haboon iyo ka sii dheer, oo ku saabsan jiirka ayaa si farxad leh u xoqin ilkahooda. Cirbadaha uma baahna in la qalajiyo, waxay noqon kartaa mid cusub oo lagu mudo cuntada ee bakaylaha sanadka oo dhan.
Waa muhiim! Xayawaanka Juniper iyo caleemaha waa in aan la siinin bakaylaha leh berry aan lakulmeen, maadaama ay yihiin sun.
Waxa la siinayo, marka laga reebo laamaha
Inkasta oo ay faa'iido weyn tahay, laantu waa in aysan aheyn cuntada kaliya ee bakaylaha. Maalintiisa maalin walba waa inuu ahaadaa ugu yaraan 300 g xagaaga iyo 200 g xilliga jiilaalka. Wixii horumarinta caadiga ah ee jirka xayawaanka, waxay u baahan tahay cagaaran, casiir leh, iyo mid aan caadi ahayn, quudin isku dhafan, iyo sidoo kale cuntada asalka ah xayawaanka.
Kala duwanaanshaha iyo hodanka ah ee maadooyinka iyo fiitamiinadu waxay noqon doonaan nafaqada jiirka, caafimaadka iyo xoogga adhigaagu wuxuu noqon doonaa.
Waxay ku jirtaa raashin wanaagsan:
Si aad u xun:
Ma taqaanaa? Khamrigu waxay arkayaan waxa ka dambeeya iyaga oo aan madaxooda u rogin.
Cunto si haboon loo xushay oo la goostay waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cunto dhamaystiran oo jiirka ah. Xaaladaha qaarkood, gaar ahaan horaanta gu'ga, marka ciidamo badan oo ka mid ah ay ka baxaan hay, waa laanta geedaha ka caawin kara bakaylaha si ay u buuxiyaan maqnaashaha.
Tani waa hab jaban oo jaban si loo yareeyo daryeelka iyo dayactirka xayawaanka.